‘पेटको रोग नभएको ब्यक्ती नेपाली नै होइन’ एउटा ब्यंग्यात्मक भनाइ प्रचलित नै छ नि, यस्तै खाना पच्दैन ? अपचकाे समस्या छ भने कसरी सुधार्ने पाचनयन्त्र - ज्ञानविज्ञान
नेपालमा एउटा ब्यंग्यात्मक भनाइ प्रचलित छ – ‘पेटको रोग नभएको ब्यक्ती नेपाली नै होइन’ । वास्तवमा नेपालीलाई सबैभन्दा बढी सताएको समस्या भनेको पेटकै हो । पेटको समस्या उत्पन्न हुनुमा मुख्यत: कुनै बेला उपवासको नाममा भोक-भोकै बस्नु र कुनै बेला बेस्सरी खानु पनि मुख्य कारक हो ।
हाम्रो भोजनमा प्रतिदिन प्रोटिन, भिटामिन, कार्बोहाइड्रेड, खनिज तथा चिल्लो पदार्थ आदि रहेको हुन्छ । हामीले खाएका त्यस्ता भोजनलाई पचाउन प्रतिदिन नै हाम्रो शरीरको भित्री अंग आमासय, आन्द्रा, पाकथैली र मुखमा र्याल सहित टाइलिन, ग्यास्ट्रिक जुस नामक तत्वहरु उत्पादन हुन्छ । जसले भोजनलाई पचाउने काम गर्छन् ।
यो पटकको दसैं अझै जारी छ । स्वभावत: दसैंमा अरुबेला भन्दा धेरै नै माछा-मासु तथा मादक पदार्थको खपत हुने गर्छ । जसले गर्दा अधिकांश ब्यक्तीहरुलाई खाना नपच्ने समस्या उत्पन्न हुनेगर्छ । यस्ता कृयाकलापहरु याद्रिच्छिक कृयाकलापहरु हुन् । याद्रिच्छिक कृयाकलापहरु हामिले थाहै नपाई हुने गर्छन् । जस्ले गर्दा खाना पचाउन हामीले अतिरिक्त दिमाग लगाइरहनु पर्दैन तर कतिपय अवस्थामा हाम्रो आफ्नै असावधानीका कारण खाना नपच्ने भएर स्वास्थ्यमा गम्भिर असर पर्न जान्छ । कुसमयमै बिभिन्न रोगको शिकार भएर ज्यान पनि जान सक्छ ।
खाना नपच्नुलाई अपच/अजिर्ण भएको भन्ने गरिन्छ । अपच कसरी हुन्छ र यस्तो नहोस् भन्नका खातिर के गर्नुपर्छ त ?
अपच हुनाका कारण
भारी खाना, धेरै खानु
कुसमयमा खाना खानु
राम्रोसँग नचपाइकन खानु
धेरै मानसिक परिश्रम गर्नु
शारीरिक परिश्रम नगरी आराम गर्नु
चिया, कफी, रक्सी, चुरोट धेरै मात्रामा सेवन गर्नु
बासीखाना वा अत्याधिक पिरो मसालेदार खाना खानु
राती धेरै समयसम्म बस्नु
डर, रिस, इर्श्या तथा मनमा ग्लानी हुनु
मन नलागेको खाना जबरजस्ती खानु
खाना खाइसकेपछि धेरै पानी पिउने बानी आदि ।
जीउ भारी भए जस्तो हुन्छ
अमिलो डकार आउँछ
छाती पोलेको जस्तो हुन्छ
टाउको भारी हुन्छ
मुटुको धडकन बढछ
शरीर आलस्य हुन्छ
जिब्रोमा फोहोरको पत्र लाग्ने थाल्छ
जब रोग पुरानो हन्छ तब पेटमा ग्यास बन्ने समस्या देखापर्छ
अपच भइसकेपछि के-के खाने ?
नियमित रुपमा समयसै सन्तुलित, हल्का खाना खाने, पुरानो चामलको भात खाने ।
सुत्नुभन्दा तीन चार घण्टा पहिले नै राम्रोसँग चपाएर खाना खाने ।
खाना खानुभन्दा अगाडी र पछाडी अदुवा र कागतीको रस आधा आधा चम्चा लिने र एक चिम्टी नुन मिसाएर खाने ।
नरिवलको पानी, काँचो गिरी, दही, मुला, सलगम, गाँजर, प्याज, अनारस, कागती, अदुवा खानासँगै या पछि नियिमत रुपमा खाने ।
बेथेको साग र काँचो मेवा खाने ।
अपच भइसकेपछि के के नखाने ?
धेरै बास्नादार, वासी, आधा पोकेको खाना नखाने
मीठो लाग्यो भन्दैमा एकै चोटी धेरै खाना पनि नखाने
अमिलो, पिरो, मसला, गरम मसला, वेसनबाट बनेको चीज, सुन्तला, टमाटर, कागती, कफी धेरै मात्रामा खानु हुँदैन
पान, बिँडी, चुरोट, तमाखु, रक्सीबाट टाढै रहने
राती दही नखाने
खाना खाएपछि तत्कालै धेरै पानी नपिउने
अपच भइसके पछि के-के गर्ने ?
सुर्योदय हुनुभन्दा अगाडी नै उठेर घुम्न जाने र शारीरिक व्यायम गर्ने
बिहान खाली पेटमा सधै एक गिलास पानी पिउने
अपच भइसकेपछि के-के नगर्ने ?
राती अबेलासम्म जागै नबस्ने
खाना छिटो-छिटो नखाने र वीच-वीचमा पानी पनि नपिउने
सम्भोगमा धेरै नगर्ने
छिटो-छिटो हडबडीमा काम नगर्ने
यसका अलावा खानालाई मुखमा राखेपछि नहतारिकन राम्ररी चपाउने । जसले गर्दा मुखको र्‍यालमा रहेका ‘टायलिन’ नामक पाचनतत्त्व उचित परिमाणमा खानासँग मिसिन पाएर खानालाई सजिलोसँग पचाउनयोग्य बनाउँछ । यसरी खानपानमा राम्रोसँग ध्यान दिएमा स्वथ्य र दिर्घायु बन्न सकिन्छ ।
कुनै औषधि यस्ता हुन्छन्, जसले अपचको समस्या ल्याउँछन्। जस्तोः दुखाइ नाश गर्ने बु्रफिन, एस्पिरिन, स्टेरायडलजस्ता औषधिहरूको सेवनले अपचको समस्या निम्त्याउँछ। यसकारण सकेसम्म यस्ता औषधि खानु हुँदैन ।
केही घरेलु तरिकाले पनि यो समस्यालाई टाढा राख्छ ।
सौफले सधैं पाचन क्रियालाई सुधार्ने काम गर्दछ । तपाईंको पेटलाई शान्त राख्नका लागि थोरै सौफ आफ्नो मुखमा राख्नुहोस् र यसलाई राम्रोसँग चपाएर निल्नुहोस् । अपच सम्बन्धि विकारमा सौफ निकै उपयोगी हुन्छ । तेल नहाली ताउमा भुटेको सौफ र नभुटेको सौफको मिश्रणले अपचको समस्यामा फाइदा पुर्याउँछ । आधा काँचो र आधा भुटेको सौफको चूर्णमा हिंग मिसाएर त्यसमा बिरे नुन मिसाउनुहोस् र २ देखि ६ ग्राम मात्रामा दिनको तीन/चारपटक खानुहोस्, यसले अपच टाढा हुन्छ ।
यदि तपाईंलाई अपचको समस्या छ भने अदुवालाई कुटेर रस निकाल्नुहोस् र हरेक दिन पिउनुहोस् । अथवा अदुवालाई पातलो गरेर काट्नुहोस् । यो पातलो टुक्रामा बिरे नुन हाल्नुहोस् र चपाउनुहोस् । यसलाई बिस्तारै चपाउनुहोस् र त्यसको रस बिस्तारै निल्नुहोस् । यसले तपाईंलाई अपचबाट राहत प्रदान गर्दछ ।
३. एलोभेरा (ध्यूकुमारी)
एलोभेराको नियमित सेवनले पनि अपचको समस्या टाढा राख्छ । साथै एलोभेरको जूस पिउँदा पेटको थुप्रै रोग हराउँछ । यसले पाचन प्रक्रियालाई बलियो बनाउँछ र शरिरको अतिरिक्त टक्सिनलाई बाहिर निकाल्न मद्दत गर्दछ । अपच हुँदा दिनमा दुई पटक १० देखि १२ मिलिलिटर ताजा एलोभेरा जेल खानुहोस् । बिहान खाली पेटमा एलेभेराको जूस पिउँदा शरिरको रोग प्रतिरोधात्मक क्षमतामा वृद्धि हुनुका साथै पेट सम्बन्धि धेरै समस्या टाढा हुन्छ ।
कोहीले यसलाई चियामा मिसाएर पिउँछन् भने कसैले मसलाको रुपमा खान मनपराउँछन् । दालचीनी हरेक घरमा रहेको हुन्छ । यो सुगान्धित, पाचक, उत्तेजक र ब्याटेरियारोधी हुन्छ । यसले पाचन क्रियालाई सुधार्छ र पेटमा बनेको ग्याँसबाट छुटकार दिलाउँछ । यसलाई चियाको रुपमा बनाउनका लागि एक कप तातो पानीमा आधा चम्चा दालचीनीको पाउडर हाल्नुहोस् र केही मिनेट उमाल्नुहोस् । त्यसपछि यो पिउनुहोस् ।
Don't Miss it सुन्दा अचम्म लाग्ला तर कुरा यहि साँचाे हाे । हरेक बिहान खाली पेटमा कागती पानी पिउँदा यसरी फेरिन्छ शरिर, आजै सुरु गर्नुहोस्
Up Next विभिन्न प्रकारका राेगहरुले हामीलाइ सताइरहेकाे हुनसक्छ त्यसैले यस्ता रोगीले भटमासको कुनै पनि परिकार सेवन नगर्नुहाेस्